पच्चिस टन मह उत्पादन « Salleri Khabar
बागलुङ, १७ असार ।
जिल्लामा यस वर्ष २५ टन मह उत्पादन भएको छ ।
जिल्लाभर करिब तीन हजार उन्नत घारमा मौरीपालन भइरहेको छ । परम्परागत घारमा मौरी पाल्ने किसानको सङ्ख्या यकिन छैन । उत्पादन भएको मह जिल्लाभित्रै खपत हुने गरेको छ । मौरीघारमा दिइएको सरकारी अनुदानले किसान उत्साहित छन् । कार्यालयले यस वर्ष २५ प्रतिशत अनुदानमा पाँच सय घार वितरण गरेको छ । किसानले रु दुई हजार छ सय पर्ने घार रु रु एक हजार ९५० मा पाउने गरेका बताइएको छ । रासस
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओे बाँडफाँट, कसलाई कति पर्यो ? यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओे बाँडफाँट, कतिले पाए शेयर, यसरी हेर्नुहोस्
सुन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो आजको बजार भाउ